Risaalo Duulaankii Itoobiya Shalay Iyo Maantay Sheekh Cismaan Shire "Abu C/raxmaan Al Cumari" (Gob-Islam Turjumaad Kooban)
Written by Maamul on 01 March 2012. KENYA:- Waxaa Risaaladaan Qoray Sheekh Cismaan Shire (Abu C/raxmaan AlCumari) Xafidahullaah, Magaceedu waa “Duulaanka Itoobiya Shalay iyo Maantay!”. Sheekhu wuxuu ka hadlay arimo badan gaar ahaan Aragtiyadii kala duwanaa ee ay qaateen Culimada Soomaaiyeed Shalay iyo Maantay ama Wakhtigaan aan qoraalkaan qorayno. Muxuu oga hadlay Risaalada Sh. Abu C/raxmaan?.
Bayaanka ugu horeeyey waxaa ku saxiixan Culimada Magacyadaan leh, sida Sheekh Abu C/raxmaan Risaaladiisa ku sheegay. Waxaana ku qoran Qodabadii Bayaankaas Culimadu ku soo saareen, marka mawada Turjumi karno ee Akhrista Bayaanka Koowaad Macluumaadka ku jira ee Taarikhiga ah Sheekhu noo soo guuriyey Culimadu tira ahaan waxay gaarayaan Magacyadoodu 80. (1) Sheekh Shariif C/nuur Sharif Xasan (2) Sheekh Maxamed Nuur Qawi. (3) Sheekh Cali Warsame Xasan. (4) Sheekh Cumar Iimaan Abu Bakar. (5) Sheekh C/laahi Cali Xaashi. (6) Sheekh Maxamuud Ciise Maxamuud. (7) Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. (8) Sheekh Nuur Macalin C/raxmaan. (9) Sheekh Jaamac C/salaam Warsame. (10) Sheekh C/risaaq Aadan Macalin. (11) Sheekh Xasan Xuseen Axmed. (12) Sheekh Cilmi D J (13) Sheekh Maxamuud Macalin Nuur (14) Sheekh C/laahi Maxamuud Ciise (15) Sheekh C/laahi Daahir Jaamac (16) Sheekh Xasan Maxamuud Taka iyo Culima badan oo gaaraya 80 Culimo, marka mawada qori karno Magacyadooda ee Risaalada ka Akhrista Insha Allah,
Bayaanka Labaad ee Culimada Soomaaliya ay ku diidanaayeen Gaalada in ay dhulalka Muslimiinta qabsato waxay ka soo saareen Magaalada Burco waxaana laga akhriyey Dhuusamareeb ama looga dhawaaqay. Waa Taariikh yaab leh oo Sheekh Abu C/raxmaan uu soo guuriyey qaarna uu goob joog uu ka ahaa. Mawada dul istaagi karno Risaalada oo 27 Bog ku dhawaad ka kooban, marka Bayaanada iyo Taariikhda uu xusay Sheekhu ma ahan mid aan soo koobi karno ee hala Akhriyo Risaalada.